Tababare Solskjær oo ka hadlay xaalada dhaawacyo ee xiddigaha Rashford iyo Maguire, kahor kulanka Bournemouth – Gool FM
Tababare Solskjær oo ka hadlay xaalada dhaawacyo ee xiddigaha Rashford iyo Maguire, kahor kulanka Bournemouth
(Yurub) 31 Okt 2019. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay in labada xiddig ee Marcus Rashford iyo Harry Maguire ay diyaar u noqon doonaan kulanka sabtida soo aadan ay ku wajahayaan Bournemouth horyaalka Premier League.
Manchester United ayaa xalay u gudubtay wareega siddeed dhamaadka koobka Carabao Cup, kaddib markii ay 1-2 kaga soo adkaatay kooxda Chelsea oo ay marti ugu noqotay garoonka Stamford Bridge, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 16-ka ee tartankan.
Tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa ku qasbanaaday inuu ciyaarta ka saaro Marcus Rashford wuuxuna badalkiisa keensaday Ashley Young daqiiqaddii 80-aad, iyadoo shaqsiyaadka qaar ay qeexayaan inuu dareemayo xanuun dhanka murqaha ah.
Dhinaca kale Harry Maguire ayaa waxaa soo gaaray dhaawac cusub ee dhanka muruqa ah, laakiin Solskjær ayaa awoodi waayey inuu bedelo kaddib markii uu wada adeegsaday dhamaan seddexda badel uu xaqa u lahaa intii uu socday kulankii Chelsea.
Haddaba tababare Ole Gunnar Solskjær oo la hadlayay Taleefishinka qaaska ah ee kooxda Manchester United ayaa wuxuu si cad u sheegay in xiddigaha Marcus Rashford iyo Harry Maguire ay diyaar u noqon doonaan kulanka Bournemouth ee Sabtida.
“Dhaawacyadu waxay la xiriiraan xanuuno fudud ee dhanka murqaha ah, halka kan kale uu jiro xanuun dhanka jilibka ah”.
“Laakiin Manchester United waxay leedahay daaweeyn dhaqso leh, waxaanna rajeyneynaa inay diyaar u noqon doonaan kulanka Sabtida”.